Shirar iska soo hor jeeda oo xerada Xalane marti-galineyso | KEYDMEDIA ONLINE
Shirar iska soo hor jeeda oo xerada Xalane marti-galineyso
Magaalada Muqdisho ayaa maanta marti galineysa shirar ka jaad ah, oo si adag isaga soo hor jeeda, waxaana cabsi xooggan laga muujinayaan inuu burburo shirka wada tashiga qaran ee Beesha Caalamku qaban qaabisay, si is fahan looga gaaro is maan dhaafka siyaasadeed ee taagan.
MUQDISHO, Soomaaliya - Shir uu gudoominayo Madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday ee Farmaajo, ayaa hadda ka socda mid ka mid ah teendhooyinka Xereda ciidanka Cirka ee Afisyooni, waxaana shirkaas qeyb ka ah, sii-hayaha xilka Ra’iisul Wasaaraha Rooble ‘Rogane’, Madaxda Maamullada Galmudug, HirShabeelle iyo Koofur Galbeed, iyo Guddoomiyaha Gobolka Banaadir.
Dhanka kale, Waxaa socdo kulan kale oo Madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland la leeyihiin Wakiillada Beesha caalamka ee Soomaaliya, kaas oo looga gol-leeyahay in Madaxda shirka ka biya diiday lagu qanciyo ka qeyb galkiisa.
Axmed Madoobe iyo Deni, ayaa Wakiillada Beesha Caalamka, u sheegay in Ajandaha shirku uusan ahayn kii ay ku heshiiyeen, isla markaana uu hal dhinac ka raran yahay, doonayanna in la xalliyo tabashooyinka ay ka muujiyeen shirka, oo ah in lagu daro qodobada ka dhiman.
Sidoo kale, Madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland ayaa kulan la qaadan doona xubnaha Madasha Badbaado Qaran dhawaan, kaas oo looga arrinsanyo arrimaha soo kordhay.
Farmaajo iyo kooxda taabacsan ayaa yeelanaya kulankii labaad muddo labo maalin gudahood ah iyagoo aysan goob joog ahayn Axmed Maxamed Islaam iyo Siciid Cabdullahi Deni.
Wixii warar ah oo ku soo kordha arrimaha shirarkaan kala soco bogga wararka Keydmedia Online.